UKUQHUTYELWA KWENKQUBO YOMSEBENZI OBUMNYAMA
Nceda ufunde le Migaqo neMiqathango ("iMigqaliselo") ngononophelo. Le migaqo icaciswe apha ngezantsi iyasebenza kubo bonke abathathi-nxaxheba abangena kwi-Black Friday ye-5 Deal promotion ("Ukunyusa") eqhutywa yi-Judine Motors CC & Crause Pre Owned Vehicles CC ("Abaxhasi"). Ukuba awuvumi ukuba ubotshelelwe yiyo yonke iMigaqo, nceda unqande ukungena kwiNkuthazo. Imiyalelo malunga nendlela yokungena kunyuselo nawo onke amabhaso ayinxalenye yeMigaqo. Ukuthatha inxaxheba ekukhuthazeni kuthathwa njengokwamkela kwakho iMigaqo kunye nokuvuma amandla akho asemthethweni okungena kwiNtengiso. Amangenelo angathobeli nayiphi na imiGaqo ayizukusebenza kwaye angasebenzi.
Umnyusi unelungelo lokuhlengahlengisa le migaqo nemiqathango nangaliphi na ixesha ngexesha lokunyusa ngokuthumela ezo zilungiso kumaphepha e-Judine Motors CC nakwiCrause Pre Owned Vehicles CC kuFacebook nakwiwebhusayithi.
Ukukhuthazwa kuvuleleke kubo bonke abahlali baseMzantsi Afrika abasisigxina kunye nabo bonke abemi boMzantsi Afrika abangaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala benelayisensi / ilayisenisi yokuqhuba esemthethweni, ngaphandle kwaBakhuphiswano abaKhutshelweyo (“Abagqatswa abafanelekileyo”).
Unyuselo aluvulelekanga kubalawuli, amalungu, amaqabane oshishino, kunye nabasebenzi boNyuselo, kunye neearhente zentengiso, abathengisi bearhente yentengiso, abacebisi, abacebisi, iinkampani ezinxulumene noko, kunye nomthengisi wazo naziphi na iimpahla okanye iinkonzo ezinxulumene noko. kunye neNkuthazo, (kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwi-Judine Motors CC kunye ne-Crause yee-Vehicles CC kunye namalungu osapho asondeleyo abantu abakhankanywe ngasentla (kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, amaqabane, amaqabane obomi, abazali nabantwana), kunye naye nawuphi na umntu ilawulwa ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo nguMkhuthazi, kunye neenkampani ezinxulumene nazo okanye abantu abakhankanywe kweli solotya 2, kubandakanya neenkampani ezibambeleyo kunye neenkxaso-mali, abasebenzi babo, iiarhente, iinkampani ezincedisayo kunye nabacebisi.
Unyuselo luya kuqala ngoLwesibini we-26 Novemba 2019 ngo-00h01 luze luphele ngoMgqibelo, umhla wama-30 kweyeNkanga ngo-24h00.
Nawaphi na amangenelo afunyenwe ngaphandle kwexesha lokunyusa aya kuthathwa njengangavumiyo, aya kuthi angafaneleki ngokuzenzekelayo, kwaye awayi kuthathelwa ngqalelo.
Inkqubo yeNdlela yokuNgena:
Ukuze ufumane iTanki yasimahla yePetroli okanye yeNkonzo eNcinci, uMgqatswa ofanelekileyo kufuneka:
Ukuthenga ngempumelelo imoto nakweliphi na isebe elikhuthazayo elithathe inxaxheba kwiBoksburg, eGauteng eMzantsi Afrika ngaphakathi kwexesha lokunyusa.
Yintengiselwano kuphela eyenzekileyo ngexesha lokunyusa eya kuthi iqinisekiswe. Iitransekshini eziwela ngaphandle kwexesha lokwazisa lama-26 ukuya kuma-30 kuNovemba ngo-2019 ziya kuthathwa njengezingekho mthethweni.
Abagqatswa abafanelekileyo baya kufumana enye yezi zinto zilandelayo:
Itanki elipheleleyo lePetroli
Ivawutsha yeNkonzo yeMoto eNcinci ukuya kwelona xabiso liphezulu li-R1500
Umfaneleko kuya kufuneka anike ikopi yoPhuculo okanye iLayisensi yaBafundi njengoko kufuneka ngokwe-Consumer Protection Act, 68 ka-2008 kunye nobungqina bokuthengwa kwezithuthi. Ukuba Ophumeleleyo akaphumeleli ukubonelela ngamaxwebhu aceliweyo zingaphelanga iiyure ezingama-48 (2) kusuku lokucelwa ukuba enze njalo, Ophumeleleyo uya kuphulukana neBhaso kwaye akasayi kuba nebango kuMkhuthazi.
Amabhaso anokunganikezelwa (kunye namangenelo angafanelekanga) ukuba iinkqubo zokungena okanye le migaqo nemiqathango khange ithotyelwe okanye ukuba ngaba uMnyuseli ufumanisa kwaye / okanye ukrokrela nasiphi na isitenxo okanye ubuqhetseba.
Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu le ntengiso ayinakho ukusebenza njengoko kucwangcisiwe ngenxa yosulelo yintsholongwane yecompyuter, iincukuthu, ukuphazamisa, ukungenelela okungagunyaziswanga, ukusilela kubuchwephesha okanye naziphi na ezinye izizathu ezonakalisa okanye ezichaphazela ulawulo, ukhuseleko, ubulungisa, ukuthembeka okanye indlela efanelekileyo yokuziphatha Inkuthazo, uMkhuthazi unelungelo ngokubona kwakhe ukucima, ukuyekisa, ukulungisa okanye ukunqumamisa ukunyusa ngokuxhomekeke kuyo nayiphi na imiyalelo ebhaliweyo phantsi komthetho osebenzayo. Umnyuseli unelungelo kwilungelo lakhe lokukhetha ukungafaneleki kuye nawuphi na umntu uMkhuthazi onesizathu sokukholelwa ukuba wophule nayiphi na kwezi meko okanye wenza naziphi na iindlela zokuziphatha gwenxa ezingekho mthethweni okanye ezibekiweyo ezibeke emngciphekweni indlela efanelekileyo yokuziphatha eyiNtengiso. Amalungelo asemthethweni okhuthazayo okufumana kwakhona umonakalo okanye enye imbuyekezo kwelo tyala agciniwe.
Umnyusi akanoxanduva lwazo naziphi na iingxaki okanye ukungasebenzi kakuhle kobuchwephesha bayo nayiphi na inethiwekhi okanye iifowuni, iinkqubo zekhompyuter, iiserver, okanye ababoneleli, izixhobo zekhompyuter, isoftware, iingxaki zobuchwephesha okanye ukuxinana kwezithuthi kwi-Intanethi okanye nakweyiphi na iwebhusayithi, okanye nayiphi na indibaniselwano yayo, kubandakanya nakuphi na ukwenzakala okanye ukonakala kwabathathi-nxaxheba okanye nawuphina omnye umntu ikhomputha enxulumene okanye ebangelwa kukuthatha inxaxheba okanye ukothula ezantsi naziphi na izinto kule Ntengiso.
Ukuba kufunwa nguMphathiswa wezoRhwebo noShishino, iKhomishini yeSizwe yabaThengi okanye nangasiphi na isizathu, siya kuba nelungelo lokuphelisa le ntengiso ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwesaziso sokupheliswa. Kwimeko enjalo, bonke abaNgeneleli ngalo ndlela bayawayeka nawaphi na amalungelo, abanokuba nawo ngokuchasene nathi kwaye ngokwenjenje bayavuma ukuba abayi kuba nandlela yimbi okanye ibango lalo naluphi na uhlobo ngokuchasene nathi.
Umnyusi unelungelo lokucima naluphi na ulwazi olufakwe ngumthathi-nxaxheba lowo uMnyuseli, ngokubona kwakhe ngokupheleleyo, ekholelwa ukuba akukho semthethweni, kuyamanyala, kuyacaphukisa okanye kuyanyelisa, okanye kunyhasha amalungelo obunini obunini bomntu wesithathu, okanye kungenjalo akulunganga kwiphulo yenzelwe ukuzonwabisa kwabaphulaphuli.
Umnyuseli akazukubekwa tyala ngayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo kuyo nantoni na eye yafunyanwa (kubandakanya kodwa kungaphelelanga kulahleko engathanga ngqo okanye enesiphumo) okanye nakuphi na ukonzakala okwenzekileyo okanye okugcinwe ngokunxulumene nokunyusa kunye / okanye amabhaso, ngaphandle kwalo naluphi na uxanduva, ayinakukhutshelwa ngaphandle ngumthetho. Umnyuseli akazukubekwa tyala ngayo nayiphi na ingcaciso engachanekanga, engachanekanga okanye engaphelelanga eyazisiweyo ngexesha okanye ngokunxulumene noku kunyuselwa ukuba ukusilela kubangelwa siso nasiphi na isizathu ngaphandle kolawulo olufanelekileyo loMnyuseli, kubandakanya ngaphandle komda, ukungasebenzi kakuhle kwezobuchwephesha okanye ukusilela okanye Iziqinisekiso (kubandakanya iiwaranti kunye nokusebenza kwamabhaso).
Isigqibo sokunyusa sokugqibela:
Izigqibo zoNyuselo kuyo yonke imiba enxulumene nokunyusa iya kuba yeyokugqibela, ebophelelayo kwaye akukho mbalelwano iya kungenwa. Umnyusi unelungelo loku:
lungisa naziphi na iimpazamo okanye okushiyekileyo ngokubhekisele kwiNkuthazo, kubandakanya nayiphi na into epapashiweyo; okanye
ayinqumamise okanye ayiphelise iNkuthazo, ngesaziso esibhaliweyo nangaliphi na ixesha, kwaye ukurhoxiswa okanye ukupheliswa kuya kuthathwa njengokuqala ukusebenza ukusukela kumhla weso saziso.
Isigqibo soMkhuthazi sokungakufanelekeli ukungena sisigqibo kwaye akukho mbalelwano iya kungenwa.
Ukusetyenziswa kweenkcukacha zakho:
Umkhuthazi uqokelela ulwazi lomntu malunga nabangeneleli (kubandakanya isazisi, uqhakamshelwano kunye nedilesi yolwazi) ukuze unxibelelane nabo malunga nokunyusa kwaye apho kufanelekileyo, baqinisekise isazisi sabo ukuze banikezele kwaye bahambise amabhaso. Iinkcukacha zobuqu ziya kuphathwa ngokungqinelana neNgxelo yabucala yoMxhasi efumaneka ku-h https: //www.judinemotors.co.za/imfihlo-mgaqo-nkqubo kwaye inokusetyenziselwa ezinye iinjongo njengoko kubekiwe kwiNgxelo yaBucala
Abakhuphiswano abafanelekileyo bayavuma ukuba amagama abo apapashwe kwezi ndaba zilandelayo:
kwiiwebhusayithi zePromotor okt https://www.judinemotors.co.za/ kunye https://www.crausepreown.co.za/
ngokusebenzisa iphepha lompapashi kuFacebook https://web.facebook.com/crausepreownvehicles/?_rdc=1&_rdr https://web.facebook.com/judinemotors/?_rdc=1&_rdr kunye namaphepha e-Instagram.
Ukuthatha inxaxheba ngokuqhubekayo ngoMphumeleleyo:
UMnyuseli angathi, emva kokuba u-Ophumeleleyo ebhengeziwe esidlangalaleni, acele ukuba lowo uphumeleleyo avume ngembalelwano okanye ngenye indlela avume, aphakamise kwaye abhengeze iimpahla okanye iinkonzo zoMnyuseli, ngaphandle kwendleko okanye indleko kuLowo uphumeleleyo. Ophumeleleyo unokucelwa ukuba athathe inxaxheba kwimikhankaso yokwazisa okanye yokusasaza kwaye ke uyavuma ukuba afotwe ngalo lonke ushicilelo kunye / okanye kwimidiya yoluntu.
Abaphumeleleyo bamabhaso, ekwamkelweni kwamabhaso, banokucelwa ukuba bachongwe ekupapasheni, kusasazo okanye kupapasho ngonxibelelwano lwangaphakathi okanye lwangaphandle lukaCaltex kubandakanya imidiya yoluntu. Emva kokuphumelela, amagama abo (igama lokuqala, okokugqibela kunye nedolophu yokuhlala) angabhengezwa kwiphepha leFaltex kuFacebook. Abaphumeleleyo abathatha inxaxheba nakuluphi na ulwazi abayi kuba nelungelo kuyo nayiphi na intlawulo okanye omnye umvuzo ngenxa yokwazisa okanye ngenye indlela.
Abathathi-nxaxheba baqinisekisa ukuba banamalungelo apheleleyo kumxholo abawufakayo kwaye ukusetyenziswa kwento exeliweyo akuyi kuba kukwaphula ilungelo lobunini lomntu wesithathu okanye amanye amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Abathathi-nxaxheba bayavuma ukuba ngokufaka "imifanekiso" yabo kunye nezimvo, banika imvume kuMkhuthazi ukuba asebenzise imifanekiso, amagqabantshintshi okanye nayiphi na inxenye yayo, nakweyiphi na imithombo yeendaba ukulungiselela iinjongo zeshishini loMnyusi, kubandakanya iinjongo zentengiso / zentengiso ngaphandle kokuqwalaselwa abathathi-nxaxheba. Imvume enjalo ihlala ihleli kwaye ayinakuguqulwa. Abathathi-nxaxheba bayakhulula kwaye bayavuma ukungabinabungozi uMkhuthazi nabo bonke abasebenza ngegunya labo kulo naliphi na ityala lolo setyenziso nakulo naliphi na ibango elivela kolo sebenziso.
Iindawo zosasazo zasekuhlaleni zibandakanya kodwa azikhawulelwanga, kuFacebook, kuTwitter, ku-Instagram, kuYouTube, umxholo wokuqala ubandakanya kodwa awuphelelanga, nasiphi na isiqwenga somxholo obhaliweyo, iaudiyo okanye ividiyo ebonakalayo okanye iiklip zomsindo, imifanekiso, iifoto.
Ukuba abathathi-nxaxheba babandakanya naluphi na ulwazi lomntu wesithathu kumxholo abawufakayo okanye olunye ulwazi olunikezwe uMkhuthazi ngeNjongo yokuNyusa, kufuneka bavunyelwe ngokusemthethweni ukuba banikezele ngolwazi olunjalo kwaye banike imvume ekubhekiswe kuyo kwisolotya le-14 ngokubhekisele koku. ulwazi. Umthathi-nxaxheba ngamnye ukhusela uMnyuseli kuyo nayiphi na ilahleko eyenzekileyo okanye amabango enziwe ngokuchasene noMkhuseli ngenxa yokuba umthathi-nxaxheba engavunyelwanga ngokusemthethweni ukuba anike olo lwazi okanye anike uMkhuthazi imvume yokuyisebenzisa.
Umxholo owenzelwe unyuselo awunakuba nangayiphi na indlela uthoba isidima okanye ube yingozi kulo naliphi na iqela; uluntu, abangenayo okanye abaxhasi. Umxholo onjalo uya kususwa kwaye umdali avaliwe kwisiza. Umxholo obonwa wenza oku kulandelayo uyakususwa kwisiza kwaye umenzi uya kuvalwa: umxholo obonwa njengogaxekile, ukuqokelelwa kolwazi lomntu, umxholo osebenza ngenjongo yorhwebo okanye umxholo othathwa njengonobungozi. Umnyusi unelungelo lokususa nawuphi na umxholo ngaphandle kwesilumkiso kwangaphambili. Umnyusi unelungelo lokugweba ezi ziqulatho zomxholo kwaye uya kusebenzisa ukuqonda kwakhe ekumiseleni ukuba ingaba bangaphandle kwezikhokelo ezichazwe kule migaqo nemiqathango.
Bonke abagqatswa abafanelekileyo kunye nabaPhumeleleyo bayamkhusela uMnyuseli, abalawuli, abasebenzi, iikontraki, iiarhente zentengiso, abacebisi, abathengisi kunye nabameli ngokuchasene nayo nayiphi na ingozi, ilahleko, amabango okanye ubunini obuvela:
ukusetyenziswa okanye ukulahlwa kwebhaso kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ingozi, ukwenzakala, ukwenzakala, okanye ilahleko;
ukuthatha kwabo inxaxheba kwiNkuthazo, kubandakanya nazo naziphi na iindleko ezinxulumene nokuthatha inxaxheba;
nakuphi na ukutshintshelwa okulandelayo okanye ukutshintshiselana ngebhaso; kunye / okanye iv. nakuphi na ukurhoxiswa ngokusemthethweni okanye ukupheliswa kwenyuselo okanye ukulungiswa kwazo naziphi na iimpazamo okanye okushiyekileyo ngaphakathi kweXesha loKwazisa.
Umthetho osebenzayo kunye negunya:
Abaphicothi zincwadi abazimeleyo kunye / okanye amagqwetha aya kongamela olu Nyuselo.
Imithetho yoMzantsi Afrika isebenza kolu nyuso ngaphandle komthetho ongomnye. Abangeneleli bangenisa kulawulo olulodwa lweenkundla zoMzantsi Afrika.
Nxibelelana noMkhuthazi: Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nxibelelana neNombolo yoMnxibelelanisi kule nombolo 011 826 2044 ngexesha lomsebenzi: NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, ngo-08h00 ukuya ku-17h00.
* Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ulwazi lwaluchanekile ngexesha lokupapasha kodwa kunokuba nokutshintsha.